Kiisaska ugu fiican Apple Watch | Wararka IPhone
Laga soo bilaabo xilligii ugu horreeyay ee Apple ay rabtay inay caddeyso doorka muhiimka ah ee Apple Watch uu doonayo inuu ku yeesho adduunka isboortiga. Maaha wax kadis ah in xidigo waa weyn oo isboorti "lala qabtay" iyadoo Apple Watch ay gacanta ku hayaan ka hor xitaa inta aysan iib aheyn. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad badan oo naga mid ah oo leh diidmo gaar ah markay tahay howlaha isboortiga oo leh saacad ka badan € 500 curcurka. Qaabka isboortiga oo leh muraayaddiisa 'Ion-X', ama moodooyinka madow ee aluminium iyo bir labadaba waa u ugaadhitaan fudud oo lagu waxyeelleeyo kuuskuusyo, dhac, iwm Sababtaas awgeed, soosaarayaasha qalabku waxay durbaba dhigayaan qamaarkooda si ay u ilaaliyaan saacadda Apple, waxaana kuu soo bandhigeynaa midka ugu xiisaha badan.
Looma yaqaan sida dadka kale laakiin leh alaab tayo sare leh iyo ilaalin ugu sareysa, Spigen ka dhigaysa sharad "bumpers" saacadda Apple. Qiimo aad u soo jiidasho leh iyo moodallo iyo midabbo kala duwan, qaarkood xitaa waxay ku daraan shaashadda shaashadda iyo dareeraha dambe ee xirmada. Kuwa jecel muuqaalka saacadda iyadoon wax kale la sii fahmin, waxaa jira xitaa qaab hufan.
Lunatik waa in ka badan inta lagu yaqaan kiisaskiisa Iphone, sidoo kale wuxuu ahaa kii iPod Nano u rogay saacad mahadnaqa kiis leh suunka. Raacida isla qaabkan hada waxay na siisaa a dahaarka aluminium ee difaaca kaas oo sidoo kale isku daraya xarkaha u gaarka ah, oo laga heli karo cinjirka iyo aluminium midabyo kala duwan leh, si loo siiyo ilaalin ugu sarreysa dhammaan walxaha saacadda, laakiin sidoo kale leh bilicsanaanta taas oo sida ugu badan kugu kalifaysa inaad jacayl la yeelatid taas oo kaa nixinaysa. Ololahaaga ee KickSarter Horaa loo bilaabay oo $ 100 waxaad ka heli kartaa taada.
Kiisaska 'Spey's CandyShell' ee loogu talagalay iPhone-ka ayaa caan ah, isla khadkan ayay shirkaddu ugu talagashay kiisaskeeda ilaalinta Apple Watch. Iyadoo midabyo si fiican ugu habboon kuwa ka mid ah suumanka isboortiga Apple Watch ayaa dhawaan la heli doonaa iyadoo qiimihiisu yahay $ 29,99. Waad iska diiwaan gelin kartaa si aad macluumaad dheeraad ah uga hesho boggooda.
Iyada oo leh qaab dhexdhexaad ah oo u dhexeeya Lunatik iyo Spigen ayaa la yimid ActionProof oo leh dabool difaac leh oo kaliya u shaqeeya moodooyinka 42mm sidoo kale waxaa lagu heli karaa oo keliya saddex midab: madow, caddaan iyo oranji. Kaliya waxaa la heli karaa laga bilaabo Juun, waxaad horey u sameyn kartaa boos celin $ 35.
Haddii qiimayaashani ay u muuqdaan kuwo la buunbuuniyey kiis aad marmar u isticmaali doontid oo keliya, ama aadan rabin inaad wax ka badan bil sugto inta kiiskaagu imanayo, JETech wuxuu bixiyaa xal dhammaystiran. Difaaca ay na siiso wuxuu noqon doonaa mid inbadan kafiican inta badan, iyo waa qiimo aad u jaban: € 9,99 oo ay la socoto rar bilaash ah. Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan, labadaba 38mm iyo 42mm waadna ka heli kartaa Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Kiisaska ugu fiican Apple Watch
Ilaa iyo goorma ayay birtu u baahan tahay ilaalin? Saacadahaydu waxay ka samaysan tahay bir oo waxay igu bixisay wax badan oo ka badan tan oo xitaa kuma fikiri karo inaan ilaaliyo.
Murugo wanaagsan, daboolida saacad… xagee loo socdaa
Vox, oo ka duwan iTunes, wuxuu bilaabayaa Loop: adeegga kaydinta daruurta